1914-1918: Ny ady namono an 'Andriamanitra - Fiangonan' Andriamanitra maneran-tany Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2014-04 mpandimby ny Magazine > 1914-1918: Ady Namono An'Andriamanitra
"Andriamanitra miaraka aminay" no teny filamatra, izay toa tsy dia mahazatra ankehitriny, izay ny miaramila alemà maro izay nandeha hiady zato taona lasa izay dia voasokitra teo am-balahany fehikibo. Ity fahatsiarovana kely ity avy amin'ny tahirin-tantara ara-tantara dia manome antsika fahatakarana tsara kokoa momba ny fandringanana ny Ady Voalohany tamin'ny 1914-1918 tamin'ny finoana ara-pivavahana sy ny finoana kristiana. Ny pasitera sy ny pretra dia nanohana ireo mpikambana ao amin'ny fiangonan'izy ireo tamin'ny fanomezan-toky fa tsy nampanantena izy ireo fa eo anelanelan'ny firenena misy azy ireo Andriamanitra. Ny fihemorana manohitra ny fandraisan'ny fiangonana anjara amin'ny ady, izay nahafaty olona saika mahatratra folo tapitrisa, toy ny Alemanina roa tapitrisa, dia mbola misy fiantraikany ankehitriny.
Ny teolojika Katolika Romana Gerhard Lohfink dia nanamarina tsara taorian'izay: "Ny nahatongavan'ireo kristiana tamin'ny ady tamim-pahazotoana tamin'ny Kristiana tamin'ny 1914, natao batisa ho vita batemy dia tsy natao ho toy ny asan'ny fandringanana ny fiangonana ...". Ny evekan'i London dia namporisika ireo parisianina mba hiady "ho an'Andriamanitra sy ny tanindrazana" ka toy ny mila ny fanampiantsika Andriamanitra. Tany Switzerland, tsy nihetsika ilay pasitera tanora Karl Barth, raha ny fahitana fa nanafika tamim-pahavitrihana ny tolona ady "An Waffen"! Tao amin'ny gazety malaza "The Christian World" dia nanohitra izy hoe: "Mampalahelo ahy indrindra ny mahita hoe mifangaro amin'ny fifangaroana tsy misy fanantenana ny faniriana ady sy finoana kristiana."
"Lalao amin'ny firenena"
Ny mpahay tantara dia nanambara ny antony mivantana sy ankolaka momba ny ady, izay nanomboka tamin'ny zorom-bolan'ny Balkans ary avy eo dia nampiditra ny fahefana lehibe an'i Eropa. Ilay mpanao gazety frantsay Raymond Aron dia namintina izany tamin'ny asany "The Century of Total War" ao amin'ny pejy 16: "Ny fifanenjanana nitombo dia teo amin'ny teboka telo lehibe nifandirana: ny fifandonana teo amin'i Aotrisy sy Russia ao Balkans, ny fifanolanan'i Franco-Alemanina any Maraoka sy ny hazakazaka fiadiana - eo amin'ny ranomasina eo anelanelan'ny Grande-Bretagne sy Alemana ary eo amin'ny tany eo ambany fahefana rehetra. Ny antony roa farany amin'ny ady dia nanamboatra ny lalana ho an'ny raharaha; ny taloha no nanome ny tselatra.
Ny mpahay tantara ara-kolontsaina dia tonga hatrany amin'ny faran'ny antony. Izy ireo dia mikaroka ireo tranga toa saro-takarina toy ny hambom-pirenena sy ny tahotra mandry fahizay, izay samy misy fiantraikany amin'ny ankamaroany. Ny mpahay tantara ao Düsseldorf, Wolfgang J. Mommsen, dia nametraka izao fanerena izao tamin’ny teny fohy: “Ady teo amin’ireo rafitra ara-politika sy ara-tsaina samihafa no nahatonga izany” ( Imperial Germany 1867-1918 [Empira Alemana 1867-1918], P. 209 ). Azo antoka fa tsy fanjakana iray irery no nanaram-po tamin’ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavan-tanindrazana tamin’ny 1914. Nomarihin’ny Britanika tamim-pahatoniana fa ny tafika an-dranomasina mpanjaka dia nitondra ny ampahefatry ny tany tao amin’ny empira izay tsy milentika mihitsy ny masoandro. Ny Frantsay dia nanao an'i Paris ho tanàna izay ahitana ny Tilikambo Eiffel ho porofon'ny fampiasana teknolojia amin'ny famoronana.
"Sambatra tahaka an'Andriamanitra any Frantsa" hoy io tamin'ny teny alemà iray nanomboka teo. Miaraka amin'ny "kolontsaina" manokana sy ny taonjato iray nahavita zava-bita tamim-pahavitrihana, ireo Alemà dia nahita ny tenany ho ambony kokoa, hoy ny mpahay tantara atao hoe Barbara Tachman:
"Fantatry ny Alemà fa manana hery ara-tafika matanjaka indrindra eto an-tany izy ireo, ary koa ireo mpivarotra mahay indrindra sy ireo banky mavitrika indrindra, miditra amin'ny kaontinanta rehetra, izay nanohana ny Tiorka tamin'ny famatsiam-bola ny lalamby avy any Berlin mankany Bagdad ary koa ny varotra Amerikana Latina. ny tenany mifatotra; fantatr'izy ireo fa fanamby ho an'ny herin'ny tafika an-dranomasina britanika izy ireo, ary teo amin'ny sehatra ara-tsaina dia afaka nandrafitra ny sampana fahalalana rehetra araka ny fitsipika siantifika izy ireo. Mendrika ny nitana andraikitra lehibe teo amin’izao tontolo izao izy ireo ( The Proud Tower, p. 331).
Tsikaritra fa impiry ny teny hoe “avonavona” no miseho amin’ny fanadihadiana momba ny tontolo sivilizasiona talohan’ny 1914, ary tsy tokony ho lazaina fa tsy ny dikan-tenin’ny Baiboly rehetra no mamerina ilay ohabolana hoe: “Ny fiavonavonana mialoha ny fahalavoana”, fa kosa, satria Ohatra, ao amin’ny Baibolin’i Lotera nanomboka tamin’ny 1984 ao amin’ny teny marina dia izao koa no mivaky toy izao: “Izay heverina ho ho faty dia hirehareha aloha.” ( Ohabolana 16,18).
Ny fanapotehana dia tsy tokony atao ahiahy tokana ny trano, toeram-pambolena ary ny mponina rehetra ao amin'ny tanàna kely sasany. Ilay ratra lehibe lavitra indrindra nentina tamin'ny kolontsaina eropeana dia heverina ho "fahafatesan'Andriamanitra", toy ny nataon'ny sasany azy. Na dia nihena aza ny isan'ireo mpiangona tao Allema tao anatin'ny taonjato vitsivitsy talohan'ny 1914 ary ny fampiharana ny finoana Kristiana dia nazoto nanerana an'i Eropa Andrefana voalohany indrindra tamin'ny endrika "servisy", ny finoana an'Andriamanitra tsara fanahy be amin'ny olona maro no mihena noho ny fahalahelovana Nandatsahan-dra tao anaty tatatra ny trondro izay niafara hatramin'izao.
Ny fanamby amin'ny andro maoderina
Araka ny nomarihin'ny mpanoratra Tyler Carrington momba an'i Eoropa Afovoany, ny Fiangonana amin'ny maha andrim-panjakana dia "mihemotra hatrany aorian'ny taona 1920," ary ratsy kokoa aza, "ankehitriny ny isan'ny mpivavaka dia ambany kely kokoa." Tsy vao izao ny zava-nisy talohan'ny 1914 dia nisy ny resaka momba ny vanim-pinoana volamena. Ny fitsidihana lalina avy amin'ny toby ara-pivavahan'ireo mpisolovava ny fomba fanakianana ara-tantara dia nitarika fongotra tsy tapaka momba ny finoana fanambarana iray avy amin'Andriamanitra. Efa teo anelanelan'ny 1835 sy 1836, David Friedrich Strauss 'Ny Fiainan'i Jesôsy, izay nofongarina tamim-pitsikilovana, dia nanontany ny maha-Andriamanitra ny niandohan'i Kristy. Na i Albert Schweitzer aza tsy tia tena aza dia naneho an'i Jesosy ho mpitory apokaliptika madio tamin'ny 1906 ny tantaran'ny Life-Jesus Research, fa olona tsara fanahy izy tamin'ny farany fa tsy olona nanompo an'Andriamanitra. Na izany aza, io foto-kevitra io dia nahatratra ny "fotoan-tsarotra lehibe" tamin'ny fahafaham-baraka sy fahatsapana famadihan'ny Alemà an-tapitrisany sy ny Eropeana hafa. Ao amin'ny tabilao sary, nipoitra ny modely fisainana tsy mahazatra, toy ny psikolojia Freud, ny teolojian'i Einstein momba ny fahaiza-miaina, ny Marxisme-Leninisme ary indrindra indrindra, ny fanambarana diso nataon'i Friedrich Nietzsche "Andriamanitra dia maty, [...] ary novonoinay izy". Betsaka ireo tafavoaka tamin'ny Ady Lehibe Voalohany no nahatsapa fa nihozongozona tanteraka ny fanorenany. Ny taona 1918 dia niditra tao anatin'ny vanim-potoana jazz tany Amerika, saingy nisy fotoana mangidy be nanomboka tamin'ny Alemanina sanda, izay nijalian'ny faharesena sy ny fahalavoana ara-toekarena. Tamin'ny taona 1920, ny mofo iray dia 1922 ny marika, vidiny izay naharitra 163 tapitrisa tsy voafetra hatramin'ny 1923.
Na dia niezaka ny hanatratra ambaratongam-pilaminana aza ny Repoblika Weimar elatra havia (1919-1933), dia olona an-tapitrisany no babon'ny endrika nihilista tamin'ny ady, izay tsy hitan'i Erich Maria Remarque zava-baovao tao amin'ny asany Im Westen. Ravan'ny miaramila miala an-trano noho ny elanelana misy eo amin'ny resaka ady lavitra eo anoloana sy ny zava-misy izay naseho tamin'izy ireo tamin'ny endrika voalavo, moka, lavaky ny akorandriaka, kanibalisma ary ny fitifirana ny voafonja. ady. “Niely ny tsaho fa niaraka tamin’ny feon-kira ny fanafihanay ary ho anay ny ady dia famitahana hira sy fandresena lava [...] Izahay ihany no nahalala ny marina momba ny ady; satria teo imasontsika izany ”(nalaina tao amin’ny Ferguson, The War of the World, p. 119).
Tamin'ny farany, na dia teo aza ny fahaleovan-tenany, ny Alemà dia tsy maintsy nanaiky ny miaramilan'ny fibodoana araka ny fepetra napetraky ny filoha amerikana Woodrow Wilson - vesaran'ny fandoavana onitra mitentina 56 lavitrisa dolara, miaraka amin'ny fahaverezan'ny faritany midadasika any Eoropa Atsinanana (ary tsy ny kely indrindra. ny ankamaroan'ny zanataniny) ary rahonan'ny ady an-dalambe ataon'ny vondrona kominista. Ny fanehoan-kevitry ny filoha Wilson momba ny fifanekem-pihavanana tsy maintsy nosoniavin’ny Alemà tamin’ny 1919 dia hoe raha alemà izy dia tsy hanao sonia izany. Naminany toy izao i Winston Churchill, mpitondra fanjakana britanika: “Tsy fandriam-pahalemana izany, fa ady amin’ny ady 20 taona”. Tena marina ny nataony!
Finoana ny fialana
Niharan’ny fihemorana lehibe ny finoana nandritra ireo taona taorian’ny ady. Ny pasitera Martin Niemöller (1892-1984), mpitondra ny Lakroa vy ary nosamborin’ny Nazia tatỳ aoriana, dia nahita “taonan’ny haizina” tamin’ny taona 1920. Tamin’izany fotoana izany, ny ankamaroan’ny Protestanta alemà dia anisan’ny kongregasiona 28 tao amin’ny Loterana na ny Fiangonana Nohavaozina, ny sasany tamin’ny Batista na Metodista. I Martin Luther dia mpiaro mafy ny fankatoavana ny manam-pahefana ara-politika, na inona na inona vidiny. Mandra-pahatongan'ny fananganana ny firenena tamin'ny vanim-potoan'i Bismarck tamin'ny taona 1860, ireo andriana sy mpanjaka teo amin'ny tanin'i Alemaina dia nifehy ny fiangonana. Izany dia namorona fepetra tsara indrindra ho an'ny nominalisma mahafaty amin'ny sarambabem-bahoaka. Raha niresaka momba ny lafiny teolojia sarotra takarina ireo teolojiana malaza eran-tany, ny fanompoam-pivavahana tany Alemaina dia nanaraka ny fomba fanao litorzika tamin’ny ankapobeny, ary ny fanoheran’ny fiangonana ny anti-Semitisma no lamina. Nanao tatitra momba ny fisaratsarahana ara-pivavahana taorian’ny Ady Lehibe Voalohany i William L. Shirer, mpanao gazety alemà:
“Na dia ny Repoblika Weimar aza dia voaozona ho an’ny ankamaroan’ny pasitera protestanta; Tsy hoe satria nitarika ho amin’ny fanonganana ny mpanjaka sy ny andriana izany, fa noho ny fanohanan’ny Katolika sy ny sosialista indrindra indrindra koa. Lasa . Afaka mahatsapa ny fironana amin'ny fisarahana eo amin'ny finoana Kristiana sy ny olona isika rehefa mahatsapa fa ireo toetra miavaka ao amin'ny Fiangonana toa an'i Martin Niemöller sy Dietrich Bonhoeffer (1933-1906) dia nirona ho fanehoana ny fanavahana ny fitsipika. Tamin’ny asa toy ny Succession, i Bonhoeffer dia nanantitrantitra ny fahalemen’ny fiangonana ho toy ny fikambanana izay, araka ny heviny, dia tsy nanana hafatra marina hatolotra intsony momba ny tahotry ny olona tany Alemaina tamin’ny taonjato faha-1945. Hoy i Scott Jersak, mpahay tantara: “Tsy afaka niantehitra tamin’ny feon’ny fiangonana nikatsaka ny hanara-dalàna an’ilay fandatsahan-dra [tsy voafehin’Andriamanitra] intsony izy io, rehefa nanoratra ny mpahay tantara Scott Jersak: “Tsy afaka niantehitra tamin’ny feon’ny eglizy iray intsony [tsy voafehy] izy io. tsy mijoro ho an'ny fanantenana utopia poakaty na ho an'ny fihemorana any amin'ny fialofana voaaro ”. Ilay teolojianina alemà Paul Tillich (20-1914), izay voatery nandao an’i Alemaina tamin’ny 1918, rehefa avy nanao ny asan’ny mpitondra fivavahana tamin’ny Ady Lehibe I, dia nahatakatra fa ny ankamaroan’ny fiangonana alemà dia nangina na nanjary tsy nisy dikany. Tsy ho vitan’izy ireo ny nampiasa feo mazava handresena lahatra ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana mba samy hanaiky ny andraikitra sy ny fanovana. "Tsy zatra tamin'ny sidina avo lenta izahay, nopotehina izahay," hoy izy nanoratra tatỳ aoriana momba an'i Hitler sy ny Reich Fahatelo (1886-1965). Araka ny efa hitantsika, ny zava-tsarotra amin’ny andro maoderina dia miasa foana. Nila ny horohoron-tany sy ny savorovoro tamin’ny ady lehibe iray nahery vaika vao nahitam-bokany.
Maty… sa velona ihany?
Arak'izany, ny voka-dratsy nahatsiravina amin'ilay "ady namono an'Andriamanitra" fa tsy tany Alemana ihany. Ny fanohanan'i Hitler avy ao am-piangonana no nahatonga ny zava-boafidy ratsy kokoa, ny Ady Lehibe Faharoa. Eto amin'io fifandraisana io dia tokony ho marihina fa mbola velona Andriamanitra ho an'izay mino azy. Ny tovolahy iray antsoina hoe Jürgen Moltmann dia tsy maintsy nanatri-maso ny fomba namonoana ny fianakavian'ireo mpiara-mianatra taminy tany an-tsekoly nandritra ny daroka baomba mahatsiravina nataon'i Hamburg. Na izany aza, ny zava-niainana ity dia nahatonga ny famelomana indray ny finoany, araka ny nosoratany:
“Tamin'ny taona 1945, dia nigadra an'ady tany amin'ny toby iray aho tany Belzika. Nianjera ny Alemà Reich. Auschwitz dia nanolotra ny kolontsaina alemanina. Rava ny tanindrazako Hamburg, ary tsy mitovy amin'ny tenako. Tsapako fa nilaozako Andriamanitra ary ny olona ary ny fanantenako tanora dia nesorina tao anaty saha. [...] Tao anatin'izany toe-javatra izany, nisy pasitera amerikana iray nanome ahy Baiboly ary nanomboka namaky izany aho ”.
Rehefa nahita tsy nahy i Moltmann ny andalan-teny ao amin’ny Baiboly izay niantsoan’i Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana hoe: “Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao” (Matio 2.7,46) rehefa voatonona, dia nanomboka azony tsara kokoa ny hafatra fototry ny hafatra kristiana. Nanazava toy izao izy: “Fantatro fa io Jesosy io no rahalahy masina ao anatin’ny fijaliantsika. Manome fanantenana ny babo sy ny nafoy Izy. Izy no manafaka antsika amin'ny fanamelohana izay mavesa-danja antsika ary manaisotra antsika amin'izay mety ho vinavina ho avy [...] Nahazo herim-po aho hifidy ny fiainana amin'ny fotoana izay mety ho vonona handray anjara amin'izany rehetra izany. faran'ny. Ilay fiarahana voalohany tamin’i Jesosy, rahalahiko tao anatin’ny fijaliana, dia tsy nandao ahy hatramin’izay” ( Who Is Christ for Us Today?, p. 2-3).
Tao amin'ny boky sy lahatsoratra ary lahateny an-jatony, nanamafy i Jürgen Moltmann fa tsy maty ny zava-drehetra fa velona amin'ny fanahy izay mivoaka avy amin'ny zanany lahy, ilay antsoin'ny kristiana hoe Jesosy Kristy. Mahagaga fa na dia zato taona taorian'ny antsoina hoe "ady izay nahafaty an'Andriamanitra" aza dia mbola mahita lalana ao amin'i Jesosy Kristy ny olona amin'ny loza sy ny korontana amin'izao androntsika izao.